आनंदमाइड VS सीबीडी: तपाईंको स्वास्थ्यको लागि कुन राम्रो छ? उनीहरूको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा!
आनन्दमाइड (AEA) अन्नाडमाइड (AEA) के हो, जसलाई परमानु अणु, वा N-arachidonoylethanolamine (AEA) पनि भनिन्छ, एक फ्याट्टी एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। नाम अनाडामिडा (AEA) जय "संस्कृत" को संस्कृतबाट आएको हो। राफेल मेचौलामले यो शब्द बनायो। कसरी उनका दुई सहायकहरू डब्ल्यूए देवने र लुमर हानुले पहिलो पटक १ 1992 XNUMX २ मा "आनंदमिडि" फेला पारे। आनन्दमाइड (AEA) एक राम्रो फिक्स हो ...
पायरोलोकोइनोलिन क्विनोन (PQQ) लिने शीर्ष5फाइदाहरू
कफटेक एक पेशेवर कम्पनी हो जुन २०१२ देखि बजारमा रहेको छ र यसको उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरूका लागि परिचित छ। यस पूरकको बारेमा सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो ग्लूटेन-रहित छ र यसमा कुनै साधारण एलर्जीन छैन। यसैले, विभिन्न प्रकारका एलर्जीको लागि संवेदनशील व्यक्तिहरूले उनीहरूको मनको शान्ति गुमाए बिना यो पूरक लिन सक्छन्। Cofttek PQQ पूरक एक उत्तम Pyrroloquinoline Quinone पूरक Curre को एक हो ...